Global Voices teny Malagasy » Ny Sarimihetsika “Da Vinci Code” Tao Azia Atsimo Atsinanana · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny Sarimihetsika “Da Vinci Code” Tao Azia Atsimo Atsinanana
Voadika ny 10 Oktobra 2017 3:38 GMT 1	 · Mpanoratra Preetam Rai Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Malezia, Thailandy, Fanoherana, Fivavahana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika
(Marihina fa tamin'ny 21 May 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Raha vao nanomboka nivoaka manerana an'i Azia Atsimo Atsinanana ny sarimihetsika ” Da Vinci Code “, dia efa nisy sahady ny fihetsiketsehana sy ny antso nataon'ny vondrona Kristiana izay nangataka ny governemanta mba handrara ny sarimihetsika. Tao Filipina, dia ny tanàndehibe Manila renivohitra no lohalaharana tamin'izany fandraràna izany.
Diso fanantenana tamin'ilay fanapahan-kevitra i Yvette  tao amin'ny bilaoginy MySpace:
Tsy azoko afenina ny fahadisoam-panantenako raha nahare zavatra tsisy dikany toy izany aho. Ao anatin'ny olana goavana rehetra izay atrehin'ny Fiangonana ao Filipina – toy ny fanampiana ireo mahantra na fanehonkevitra momba ny kolikoly fa tsy hoe anisan'ny mandray anjara amin'izany – dia nisafidy nampiaka-peo tamin'ny fandraràna ny sarimihetsika masiaka mifototra amin'ny tantara foronina ahitana an'i Tom Hanks misarita-bolo izy ireo.
Faly i Lucia Lai  ao Malezia fa aseho ao an-toerana ny sarimihetsika
Raha ny marina, tena faly aho fa navela hiseho malalaka io sarimihetsika io, ary maniry hatrany hatrany aho fa tsy misy fiangonana na fikambanana hanambara fa tokony horarana ity sarimihetsika ity. Tiako raha haseho ny sarimihetsika ary tiako izao tontolo izao hahita ny fihetsiky ny Kristianina.
Tao Thailandy, nambara tamin'ny voalohany fa hosivanana noho ny fihetsiketsehan'ireo vondrona Kristiana Thailandey ny 10 minitra farany amin'ny sarimihetsika. Taty aoriana anefa, navelan'ny manampahefana nalefa manontolo ny sarimihetsika .
Nilaza i Andrew Biggs  tao Thailandy hoe:
Nambara omaly fa tsy ho tapaka ny folo minitra farany ao amin'ny Da Vinci Code . Hooeey! Fandresena ho an'ny fahatsapantena iraisana izany.
Araka ny voalazan'ny firenena tamin'ity maraina ity, handefa hafatra fanazavana miaraka amin'ny tapakila rehetra amidy ny orinasan-tsarimihetsika. Hevitra tsara kokoa izany, sa tsy izany? Afaka mampianatra ny olona isika ary mampianatra azy ireo hisaina momba ny tenany manokana, fa tsy hanao fandrarana tsotra fotsiny amin'izao.
Vaovao farany: Nandefa mailaka momba ny fihetsika hafa tanteraka  tao Indonezia ilay bilaogera ao amin'ny Unspun: Deciphering Indonesia tamin'ny filazana fa tsy nangataka ny fandraràna ny Vaomieran'ny Eveka tao Indonezia (KWI).
Mifototra amin'ny fiheverany fa efa matotra tsara ny Katolika ao Indonezia ny fanapaha-kevitry ny KWI ary hampitombo fotsiny ny faniriany ny fandraràna azy ireo hijery ny horonantsary. Manontany tena ny sasany hoe fa inona no tena ao an-tsain'ireo ao Vatican.
Mety hihevitra ianao fa efa nianatra ny momba ny Fitsipiky ny Fahavitsiana izy ireo hatramin'ny andro nitsangatsanganan'i Adama sy i Eva tao Edena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/10/108263/
 Lucia Lai: http://lucialai.org/2006/05/18/debunking-the-code/
 Andrew Biggs: http://www.andrewbiggs.com/blog2/?p=74
 fihetsika hafa tanteraka: http://unspun.wordpress.com/2006/05/21/indonesian-catholics-smarter-than-vatican/